Radaarrada Militariga - AOOD Technology Limited
Raadaarka milatarigu waa mid ka mid ah dariiqyada muhiimka ah ee lagu helo cimilada oo dhan, sirdoonka xeeladeed iyo xeeladeed ee maalinta oo dhan, waa dareeraha koowaad ee difaaca hawada, difaaca badda, nidaamyada hubka difaaca dhulka iyo nidaamyada otomaatiga taliska. Ma bixin karto oo kaliya digniinta hore, dhexda, raadraaca, aqoonsiga, hagidda iyo dhexgalka dhammaan noocyada bartilmaameedyada duulimaadka ee hawada, badda, dhulka iyo bannaanka, laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay sawirto bartilmaameedyo ballaadhan oo go'an oo ku salaysan hawada ama dibadda dhufaysyada bannaan. Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo xallinta iyo saxnaanta cabbirka aysan u fiicnayn dareemayaasha indhaha iyo infrared-ka, waxqabadka radar millatariga cimilada oo dhan, maalinta oo dhan iyo heerka sare ee xogta hawada sare ayaa ah mid aan beddeli karin dareemayaal kale, sidaa darteed raadaarka milatarigu wuxuu ciyaaraa si aad ah door muhiim ah ku leh duurka milateri, wuxuuna leeyahay ballaaran
rajada dalabka ee kala duwan.
Raadaarka milatarigu waa mid ka mid ah dariiqyada muhiimka ah ee lagu helo cimilada oo dhan, sirdoonka xeeladeed iyo xeeladeed ee maalinta oo dhan, waa dareeraha koowaad ee difaaca hawada, difaaca badda, nidaamyada hubka difaaca dhulka iyo nidaamyada otomaatiga taliska. Ma bixin karto oo kaliya digniinta hore, dhexda, raadraaca, aqoonsiga, hagidda iyo dhexgalka dhammaan noocyada bartilmaameedyada duulimaadka ee hawada, badda, dhulka iyo bannaanka, laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay sawirto bartilmaameedyo ballaadhan oo go'an oo ku salaysan hawada ama dibadda dhufaysyada bannaan. Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo xallinta iyo saxnaanta cabbirka aysan u fiicnayn dareemayaasha indhaha iyo infrared-ka, waxqabadka radar millatariga cimilada oo dhan, maalinta oo dhan iyo heerka sare ee xogta hawada sare ayaa ah mid aan beddeli karin dareemayaal kale, sidaa darteed raadaarka milatarigu wuxuu ciyaaraa si aad ah door muhiim ah ku leh goobta milatariga, waxayna leedahay rajooyin codsi oo ballaaran.
Shirkii giraanta siilka ee radar AWACS badiyaa waxay u baahan tahay inay qabato awood badan iyo xog aad u tiro badan, laakiin badiyaa waxay leedahay shuruud boos oo aad u muhiim ah, soo -saaraha giraanta silsiladda sidoo kale waxay u baahan tahay inay tixgeliso cimri dhererka bay'ada ee kulanka giraanta siilka sababta oo ah culeysyada kuuskuuska ah iyo culeysyo isdaba joog ah oo aad u sarreeya oo shaqeynaya. Rada laga helo bartilmaameedka sanka dagaalyahan dagaal ayaa u badan inay adeegsadaan kaabsoolada giraanta siilka yar ee milatariga ah ee AOOD si ay u wareejiyaan awoodda iyo xogta / signalada. Marka la soo koobo, ururinta giraanta siilka ee raadaarka hawada sida caadiga ah waxay leedahay astaamaha hoose:
• Wareegyo badan, oo ay ku jiraan awood sare iyo xog adag / wareegyo signal
• Qiyaasaha halista ah, xirmo adag iyo miisaan fudud
• Adkeyn bay'adeed oo la isku halleyn karo
Shirkii giraanta silsiladda siligga ee markabka lagu rakibay ayaa sidoo kale u baahan in la xakameeyo awoodda adag iyo gudbinta xogta / gudbinta meelaha bannaan, laakiin jirka birta ka samaysan iyo ilaalinta sare si looga hortago gelitaanka biyaha cusbada aad bay muhiim u tahay.
Sannado badan oo naqshadaynta iyo soo saaridda goleyaasha silsiladda raadaarka ee militarigu cayimay, AOOD waxay si joogto ah u hagaajisaa agabyada giraanta silsiladda korantada, qaab-dhismeedka iyo ka shaqaynta, si looga gudbo dhammaan caqabadaha oo loo dhiibo macaamiisheena caalamiga ah oo loo xaqiijiyay siddooyinkii silsiladda raadaarka ee milatariga.